နောင်ရေးစိတ်အေးရအောင် မြေအောက် ရေချိုကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းကြမလဲ - Barnyar Barnyar
အမှန်ကကျွန်တော်ကို mindset နဲ့knowledge sharing စတင်ပေးခဲ့တာ ဘူမိဗေဓအရာရှိကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ အန်ကယ်ဦးအောင်လွင်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်ကတဲက ရန်ကုန်မြို့မှာ ကွန်ကရိတွေ အပြည့်မခင်းသင့်ကြောင်း မြေအောက်ရေပြန်လည်ဖြည့်တင်းဘို့အတွက် ကွန်ကရိ သို့မဟုတ် သံဇကာ အကွက်များနဲ့ ကြားခံ ထားသင့်ကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးပေးခဲ့ဘူးပါတယ်
ရန်ကုန် မှာ ရေချို ရှားပါးလာပါပြီ ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင် များမကြာမှီ နှစ်များအတွင်းမှာ မြေအောက်ရေ လုံးဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ…. အဓိက အချက်တခုကတော့ ရေချို သံသရာ မလည်ပါတ်တော့တဲ့ အချက်ပါပဲ… ရန်ကုန်မှာ မြေကြီးရှားပါးလာပါပြီ…
ကွန်ကရစ် လမ်းတွေ အပြည့်ခင်းလာကြတော့ မြေကြီးပေါ် ကို မိုးတွင်းကာလ မိုးရေ ရေချိုကို ကွန်ကရစ်အခင်းတွေကြောင့် မြေကြီးထဲ ဝင်နိုင်မှု မရှိတော့ပါဘူး… မိုးတွင်းမိုးရေက ကွန်ကရစ် လမ်းကနေ ကွန်ကရစ်မြောင်း အဲ့ကမှတဆင့် မြစ်ထဲ တိုက်ရိုက် စီးဆင်းသွားပါပြီ…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇က ဟုန်းလမ်းက မြေအောက်ရေ ဆိုးဝါးလာလို့ ဓာတ်ခွဲခန်း ပို့ထားတဲ့ ရလာဒ်ကို ကြည့်ပါ…. ဖော်ပြပေးထားပါတယ်….
အောက်ကပို့စ်ကတော့ အိန္ဒိယ ကပညာရှင်တယောက် တီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ မြေအောက်ရေ ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နည်းလမ်းလေးပါ…
မြေအောက်ရေ ဆက်လက်မပျက်ဆီးအောင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလည်း… ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတို့ အပေါ်မှာပဲ တာဝန်ရှိလာပါပြီ…
“မြေအောက်ရေဟာ ထုတ်ယူပါများလို့ ကျသွားရင် ရေငန်က ထိုးဝင်လာတယ်။ အဲဒီ တွင်းပျက်လို့ကတော့ ပြန်ပြင်လို့ကို မရတော့ဘူး။ ထာဝရပျက်သွားတာ ။ ထာဝရပျက်သွားတဲ့ အတွက် လူတွေဟာ သူတို့ မှီခိုရာ ရေချိုကို ထာဝရ အဲဒီနေရာကနေ မရတော့ဘူး။
နံပါတ် ၂ က မြေကြီးက အောက်နှိမ့်ဝင်သွားတာ ။ ဒါကြောင့်မို့လို လူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်တွေက ကံကြီးကောင်းပါမှ အိမ်တစ်လုံးလုံး မြေမြိုသွားမှာ။ ကံကြီး မကောင်းရင် တစ်ဖက် အနိမ့်အမြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ခြမ်းကွဲသွားတာတို့ ရှေ့ကို ငိုက်ကျတာတို့ ဘေးကို စောင်းပြိုတာတို့ အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်”
ရန်ကုန်မြို့တွင် လူတစ်ဦး နေ့စဉ် အသုံးပြု ရေဂါလန် ၃၀ ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ YCDC အနေနှင့် ရန်ကုန်လူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ရေချိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်သေးသည်။ ထို့အတွက် ကျန် လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စက်ရေတွင်းများနှင့် မြေအောက်ရေကို တူးယူ သုံးစွဲနေကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ (crd Dr Ni Ni Thein)
မေလ ၁၂ ရက်နေ့က တင်ခဲ့သောပို့စ်ပါ ပထမပုံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမြို့နေ ဆူဘဂျစ်မူကာဂျီ ရေးဆွဲသည့်ပုံ ဖြစ်သည်။ ဆူဘဂျစ်မူကာဂျီသည် မွန်ဘိုင်းကျောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ပုံပါ “ရေစိမ့်ပုံး”များကို လက်တွေ့တပ်ဆင်စေခြင်းဖြင့် မြေအောက်ရေ ထိန်းသိမ်းတတ်အောင် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ပလတ်စတစ်ပုံးတစ်လုံး၏ ပတ်လည်နှင့်အောက်ခြေတွင် အပေါက်များဖောက်သည်။ ပုံး၏အချင်းထက် တစ်ပေ ပတ်လည်ခန့် ပိုကျယ်သောကျင်းတူးကာ ပုံးကိုမြေကြီးထဲထည့်သည်။ ကျင်းအောက်ခြေ၊ ပုံးနှင့်ကျင်းနံရံကြားတို့ထဲသို့ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်စရစ်၊ အုတ်ကျိုးတို့ ထည့်သည်။
ကျောက်နှင့်အုတ်တို့သည် မြေသားများ ပုံးထဲသို့ မဝင်အောင် ဆန်ကာသဘောတားဆီးထားသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းဆောင်အမိုးမှ ကျလာသော မိုးရေများကို ပိုက်ဖြင့်သွယ်၍ ပုံးထဲထည့်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူကာ ကုန်ကျစရိတ်လည်း နည်းသည်။ ရွှံ့မြေများမှလွဲ၍ ကျန်နေရာများတွင် ရေအနည်းနှင့်အများ စိမ့်ဝင်နိုင်သည်။
မိုးရေသည် ပုံးရှိအပေါက်များ၊ ဘေးပတ်လည်ရှိ ကျောက်များကိုဖြတ်ကာ မြေကြီးထဲစိမ့်ဝင်သွားပြီး မြေအောက်ရေကို ပြန်ဖြည့်ပေးသည်။ ကျောင်းသားတို့သည် သူတို့လုပ်ထားသော ရေစိမ့်ပုံးမှတဆင့် မိုးရေများ မြေအောက်စိမ့်ဝင်သွား သည်ကို ကြည့်၍ မြေအောက်ရေဖြည့်ခြင်းသဘောကို ကောင်းစွာနားလည်သွားသည်။
မိုးကုန်သောအခါ သူတို့ ပြန်ဖြည့်ပေးသောရေကြောင့် ကျောင်းအဝီစိတွင်းတွင် ခါတိုင်းထက် ရေပိုမြင့်နေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် အလွန် ပျော်ရွှင်ကြသည်။
အဆိုပါနည်းအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းများတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် မြန်မာကလေးငယ်တို့လည်း မြေအောက်ရေ သဘောတရားကို လက်တွေ့နားလည်၊ ကျောင်းဝန်းကျင် မြေအောက်ရေကိုလည်း ဖြည့်ပြီး ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
( မိုးရေလှောင်ကန်စာအုပ်တွင် ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာကို ကြိုတင်ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါသည်။) #Credit to writer
နောငျရေးစိတျအေးရအောငျ မွအေောကျ ရခြေိုကို ဘယျလို ထိနျးသိမျးကွမလဲ
အမှနျကကြှနျတျောကို mindset နဲ့knowledge sharing စတငျပေးခဲ့တာ ဘူမိဗဓေအရာရှိကွီးတဦးဖွဈတဲ့ အနျကယျဦးအောငျလှငျပါ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး၂၀ကြျောကတဲက ရနျကုနျမွို့မှာ ကှနျကရိတှေ အပွညျ့မခငျးသငျ့ကွောငျး မွအေောကျရပွေနျလညျဖွညျ့တငျးဘို့အတှကျ ကှနျကရိ သို့မဟုတျ သံဇကာ အကှကျမြားနဲ့ ကွားခံ ထားသငျ့ကွောငျး အကွံပွုဆှေးနှေးပေးခဲ့ဘူးပါတယျ
ရနျကုနျ မှာ ရခြေို ရှားပါးလာပါပွီ ဒီအတိုငျးဆကျသှားမယျဆိုရငျ မြားမကွာမှီ နှဈမြားအတှငျးမှာ မွအေောကျရေ လုံးဝ ပကျြစီးသှားမှာပါ…. အဓိက အခကျြတခုကတော့ ရခြေို သံသရာ မလညျပါတျတော့တဲ့ အခကျြပါပဲ… ရနျကုနျမှာ မွကွေီးရှားပါးလာပါပွီ…
ကှနျကရဈ လမျးတှေ အပွညျ့ခငျးလာကွတော့ မွကွေီးပျေါ ကို မိုးတှငျးကာလ မိုးရေ ရခြေိုကို ကှနျကရဈအခငျးတှကွေောငျ့ မွကွေီးထဲ ဝငျနိုငျမှု မရှိတော့ပါဘူး… မိုးတှငျးမိုးရကေ ကှနျကရဈ လမျးကနေ ကှနျကရဈမွောငျး အဲ့ကမှတဆငျ့ မွဈထဲ တိုကျရိုကျ စီးဆငျးသှားပါပွီ…
လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇က ဟုနျးလမျးက မွအေောကျရေ ဆိုးဝါးလာလို့ ဓာတျခှဲခနျး ပို့ထားတဲ့ ရလာဒျကို ကွညျ့ပါ…. ဖျောပွပေးထားပါတယျ….
အောကျကပို့ဈကတော့ အိန်ဒိယ ကပညာရှငျတယောကျ တီထှငျဖနျတီးထားတဲ့ မွအေောကျရေ ကောငျးမှနျအောငျဆောငျရှကျနညျးလမျးလေးပါ…
မွအေောကျရေ ဆကျလကျမပကျြဆီးအောငျ ဘယျလိုဆကျလုပျကွမလညျး… ရနျကုနျသူရနျကုနျသားတို့ အပျေါမှာပဲ တာဝနျရှိလာပါပွီ…
“မွအေောကျရဟော ထုတျယူပါမြားလို့ ကသြှားရငျ ရငေနျက ထိုးဝငျလာတယျ။ အဲဒီ တှငျးပကျြလို့ကတော့ ပွနျပွငျလို့ကို မရတော့ဘူး။ ထာဝရပကျြသှားတာ ။ ထာဝရပကျြသှားတဲ့ အတှကျ လူတှဟော သူတို့ မှီခိုရာ ရခြေိုကို ထာဝရ အဲဒီနရောကနေ မရတော့ဘူး။
နံပါတျ ၂ က မွကွေီးက အောကျနှိမျ့ဝငျသှားတာ ။ ဒါကွောငျ့မို့လို လူတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ အိမျတှကေ ကံကွီးကောငျးပါမှ အိမျတဈလုံးလုံး မွမွေိုသှားမှာ။ ကံကွီး မကောငျးရငျ တဈဖကျ အနိမျ့အမွငျ့ဖွဈပွီးတော့ တဈခွမျးကှဲသှားတာတို့ ရှကေို့ ငိုကျကတြာတို့ ဘေးကို စောငျးပွိုတာတို့ အကုနျဖွဈနိုငျတယျ”
ရနျကုနျမွို့တှငျ လူတဈဦး နစေ့ဉျ အသုံးပွု ရဂေါလနျ ၃၀ ရှိပွီး ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီ YCDC အနနှေငျ့ ရနျကုနျလူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကိုသာ ရခြေိုဖွနျ့ဝပေေးနိုငျသေးသညျ။ ထို့အတှကျ ကနျြ လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးသညျ ကိုယျထူကိုယျထ စကျရတှေငျးမြားနှငျ့ မွအေောကျရကေို တူးယူ သုံးစှဲနကွေရခွငျး ဖွဈသညျ။ (crd Dr Ni Ni Thein)
မလေ ၁၂ ရကျနကေ့ တငျခဲ့သောပို့ဈပါ ပထမပုံသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ မှနျဘိုငျးမွို့နေ ဆူဘဂဈြမူကာဂြီ ရေးဆှဲသညျ့ပုံ ဖွဈသညျ။ ဆူဘဂဈြမူကာဂြီသညျ မှနျဘိုငျးကြောငျးကြောငျးသူကြောငျးသားမြားအား ပုံပါ “ရစေိမျ့ပုံး”မြားကို လကျတှတေ့ပျဆငျစခွေငျးဖွငျ့ မွအေောကျရေ ထိနျးသိမျးတတျအောငျ ကွိုးပမျးလကျြရှိသညျ။
ပလတျစတဈပုံးတဈလုံး၏ ပတျလညျနှငျ့အောကျခွတှေငျ အပေါကျမြားဖောကျသညျ။ ပုံး၏အခငျြးထကျ တဈပေ ပတျလညျခနျ့ ပိုကယျြသောကငျြးတူးကာ ပုံးကိုမွကွေီးထဲထညျ့သညျ။ ကငျြးအောကျခွေ၊ ပုံးနှငျ့ကငျြးနံရံကွားတို့ထဲသို့ ကြောကျတုံး၊ ကြောကျစရဈ၊ အုတျကြိုးတို့ ထညျ့သညျ။
ကြောကျနှငျ့အုတျတို့သညျ မွသေားမြား ပုံးထဲသို့ မဝငျအောငျ ဆနျကာသဘောတားဆီးထားသညျ။ ထို့နောကျ ကြောငျးဆောငျအမိုးမှ ကလြာသော မိုးရမြေားကို ပိုကျဖွငျ့သှယျ၍ ပုံးထဲထညျ့သညျ။ အလှနျရိုးရှငျးလှယျကူကာ ကုနျကစြရိတျလညျး နညျးသညျ။ ရှံ့မွမြေားမှလှဲ၍ ကနျြနရောမြားတှငျ ရအေနညျးနှငျ့အမြား စိမျ့ဝငျနိုငျသညျ။
မိုးရသေညျ ပုံးရှိအပေါကျမြား၊ ဘေးပတျလညျရှိ ကြောကျမြားကိုဖွတျကာ မွကွေီးထဲစိမျ့ဝငျသှားပွီး မွအေောကျရကေို ပွနျဖွညျ့ပေးသညျ။ ကြောငျးသားတို့သညျ သူတို့လုပျထားသော ရစေိမျ့ပုံးမှတဆငျ့ မိုးရမြေား မွအေောကျစိမျ့ဝငျသှား သညျကို ကွညျ့၍ မွအေောကျရဖွေညျ့ခွငျးသဘောကို ကောငျးစှာနားလညျသှားသညျ။
မိုးကုနျသောအခါ သူတို့ ပွနျဖွညျ့ပေးသောရကွေောငျ့ ကြောငျးအဝီစိတှငျးတှငျ ခါတိုငျးထကျ ရပေိုမွငျ့နသေညျကို တှရေ့သဖွငျ့ အလှနျ ပြျောရှငျကွသညျ။
အဆိုပါနညျးအတိုငျး မွနျမာနိုငျငံကြောငျးမြားတှငျ လုပျဆောငျနိုငျလြှငျ မွနျမာကလေးငယျတို့လညျး မွအေောကျရေ သဘောတရားကို လကျတှနေ့ားလညျ၊ ကြောငျးဝနျးကငျြ မွအေောကျရကေိုလညျး ဖွညျ့ပွီး ဖွဈသှားလိမျ့မညျ။
( မိုးရလှေောငျကနျစာအုပျတှငျ ပါရှိသညျ့ အကွောငျးအရာကို ကွိုတငျဝငှေခွငျးဖွဈပါသညျ။)
Total Hits : 334917